भर्खरै आयो मनै रुवाउँने दुखद् खबर, ६२ यात्रु बोकेको विमान दुर्घ’टनाग्रस्त, उद्धारकार्यमा खटियो सेना ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै आयो मनै रुवाउँने दुखद् खबर, ६२ यात्रु बोकेको विमान दुर्घ’टनाग्रस्त, उद्धारकार्यमा खटियो सेना !
भर्खरै आयो मनै रुवाउँने दुखद् खबर, ६२ यात्रु बोकेको विमान दुर्घ’टनाग्रस्त, उद्धारकार्यमा खटियो सेना !
काठमाडौँ- इन्डोनेसियाको स्रीविजया एयरको एउटा जहाज जकार्ताबाट उडेको केहीबेरमै शनिबार बेलुकी दुर्घटनामा परेको पुष्टि भएको छ ।
जकार्ताबाट इन्डोनेसियाकै पोन्टियानाकका लागि उडेको उक्त जहाज उडेको केही बेरमै दुर्घटनामा परेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
जहाजमा चालक दलका १२ सहित ६२ जना सवार थिए । ५० यात्रुहरुमध्ये ७ जना बालबालिका रहेको जनाइएको छ ।
जकार्ता – इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता नजिकको जलक्षेत्रबाट उद्धारकर्ताहरुले एउटा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सवार व्यक्तिका अवशेष, विमानका टुक्रा र लत्ताकपडा बाहिर निकालेका छन् ।
जकार्ताबाट शनिबार अपराह्न उडेको एउटा यात्रुबाहक विमान उडेको केही मिनेटभित्रै जकार्ता नजिकको समुद्री क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । विमानमा चालक दलका सदस्य सहित ६२ जना सवार थिए ।
जकार्ताको सोकार्नो–हाता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको श्रीविजया एयरको बोइङ ७३७–५०० विमान उडेको चार मिनेटभित्रै सिधै समुद्रमा खसेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
इन्डोनेसियाली यातायात मन्त्रालयका अनुसार, सेना समेतको सहयोगमा गोताखोरहरुले विमानको अवशेष पानीको सतहभन्दा करिब ७५ फिटमुनि फेला पारेका थिए । विमानको भ्वाइस तथा डाटा रेकर्डर भने फेला परेको छैन ।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । विमानमा सवार सबै व्यक्ति इन्डोनेसियाली रहेका थिए जसमा १० जना बालबालिका पनि थिए ।
कोरोनाको नाममा ह्याम्स अस्पतालको ठगी धन्दा…! ‘लाश’ माथि पनि ब्यापार !सबैलाई सचेत हुन आग्रह
ललितपुरमा गेष्ट हाउसको कोठामा लगेर २७ वर्षीया महिलामाथि सामू’हिक बला’त्कार